Maraykan mindi ku dilay 2 nin oo isku dayday inay u hiiliyaan 2 gabdhood oo Muslimiin ah - Horn Future
Maraykan mindi ku dilay 2 nin oo isku dayday inay u hiiliyaan 2 gabdhood oo Muslimiin ah
Portland (Horn Future)-Ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in 2 nin lala dhacay mindi ilaa ay ka dhimanayeen magaalada Portland ee gobolka Oregon kadib markii ay isku dayeen in ay ka hortagaan ninkan dilaaga ah in uu dhibaateeyo 2 gabdhood oo Muslimiin ah sida ay sheegtay warbaahinta caalamka iyo tan guduhu.
Falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay tareen dushii saacado ka hor bilowga bisha Ramadaan.
War qoraal ah oo ay soo saartay waaxda booliiska Portland ayaa lagu sheegay in weerarkan uu dhacay galinkii dambe ee Jimcihii kadib markii ninkan dilaaga ah uu bilaabay in uu ku qayliyo aflagaado diimeed iyo cay isir-sooc ah oo uu gaystay 2 dumar ah oo Muslimiin ah oo saarnaa tareenka( MAX train).
Dhanka kale waxa booliisku faafiyay magacyada dhibanayaasha ninkan dilka loo gaystay,waxana lagu sheegay Ricky John Best oo ah 53 jir iyo Taliesin Myrddin Namkai Meche oo ah 23 jir ah halka ninka dhaawaca ah lagu sheegay magiciisa Micah David-Cole Fletcher oo 21 jir ah.
Warkan qoraalka ah ayaa waxa uu intaa ku daray in 3da nin oo soo dhexgalay arrinta ay la kulmeen weerarkan mindida ah halkaas oo 2 lamidka ah ay ku dhinteen dhacdadan.
Booliska ayaa sheegay in fal dambiyeedkan ay u qabteen nin magiciisa lagu sheegay Jeremy joseph Christian oo da’diisu ay tahay 35 jir wax yar kadib markii uu degay tareenka.
Waxa dalka Maraykanka si weyn kor ugu kacay falal dambiyeedka ku salaysan nacaybka ka dhanka ah dadka Muslimiinta ah kadib markii Donald Trump uu ka dhigtay istraatiijiyadiisa kicinta nacaybka xambaarsan ee ka dhanka ah dadka Muslimiinta ah intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashooyinka ee kal hore.
« Maxay yihiin cabitaanka ugu fiican ee suxuurta?	» New York Times: Maraykanku waxa uu ku dilay Iraq iyo Syria 3,100 qof oo rayid ah